Quality - Infinite-electronic
Manadihady tsara ny fahaiza-manaon'ny mpandraharaha ara-bola isika, mba hifehy ny kalita hatramin'ny voalohany. Manana ekipa QC misy antsika isika, afaka manara-maso sy mifehy ny kalitao mandritra ny dingana rehetra, ao anatin'izany ny fanatobiana, ny fitehirizana ary ny fametrahana. Ny ampahany rehetra alohan'ny sedraina dia handalo ny Departments QC, manolotra 1 taona an-tariby ho an'ny faritra rehetra atolotra.
Ny fitsapana antsika dia ahitana:
Famaranana ny fanamarinana ny fahafatesana
Fampiasana mikrosopia stereoscopic, ny endriky ny singa ho an'ny 360 ° manodidina ny fanaraha-maso. Ny fifantohan-kaontinantan'ny maso dia ahitana ny fanangonana vokatra; chip type, daty, batch; fanontam-pirinty sy fanontana; pin arrangement, cooplanar amin'ny fametahana ny raharaha sy ny sisa.
Ny fanaraha-maso akaiky dia afaka mahatakatra haingana ny fepetra takiana amin'ny fanatanterahana ireo fepetra ekstetin'ny mpamorona ny orinasa mpamokatra marika, ny antitra sy ny fahamendrehana ary ny fampiasana na fanavaozana.
Ny lahasa rehetra sy ny paradisa rehetra dia voazaha, natao ho toy ny fôsily fôsily, araka ny fombafomba manokana, fampandrenesana fampiharana, na tranonkala fangatahana mpanjifa, ny fiasa feno ny fitaovana notsapaina, anisan'izany ny paikady DC, saingy tsy misy ny singa AC ny fanadihadiana sy ny fanamarinana ny ampahany amin'ny fitsapana tsy dia lehibe loatra ny fetran'ny safidy.
Ny fanaraha-maso an-tsoratra, ny fandikana ireo singa ao anatin'ny 360 ° ny fihodinana rehetra, mba hamaritana ny rafitra anatiny ao amin'ny test sy ny famerana ny fifandraisana dia ahitanao ny karazam-pitsapana maro samihafa, (Mifangaro) dia mitranga ny olana; Ankoatr'izy ireo koa dia manana ny mari-pahaizana (Datasheet) izy ireo fa tsy takatr'izy ireo ny fahamarinan'ny ohatra napetraka. Ny toetoetry ny fonosam-pitsapana, mba hianatra momba ny fifandraisana sy ny fifandraisana eo amin'ny pens dia mahazatra, mba hisintonana ny fanalahidy sy ny open-wire tsy misy fetra.
Tsy fomba fijerena hosoka izany satria ny oksidanana dia mitranga; Na izany aza dia olana manan-danja eo amin'ny sehatra izy io ary indrindra any amin'ny toetr'andro mafana sy mando toy ny atsimo atsinanan'i Azia sy ireo firenena atsimo any Amerika Avaratra. Ny rafitra iraisana J-STD-002 dia mamaritra ny fomba fitsapana ary manaiky / manilikilika ny fepetra ho an'ny lavaka, ny tendrony, ary ny fitaovana BGA. Ho an'ireo fitaovana fanorenana tsy misy BGA dia ampiasaina ny dip-and-look ary ny "testamenta plastika seramika" ho an'ny fitaovana BGA dia vao tafiditra ao anatin'ny serivisinay. Ireo fitaovana izay atolotra amin'ny fonosana tsy mifanentana, ny fanamafisana azo ekena, fa efa mihoatra ny herintaona, na ny fampisehoana ny bakteria amin'ny sora-baventy dia soso-kevitra amin'ny fisedrana azo atao.
Fitsapana iray manimba izay manaisotra ny fitaovana fanalefahana an'ilay singa mba hanambarana ny maty. Avy eo dia nodinihina ny mari-pamantarana sy ny maritrano mba hamaritana ny azo tsapaina sy ny maha-marina ny fitaovana. Ny hery fanamafisana eo amin'ny 1,000x dia ilaina mba hamantarana ny marika sy ny tsy mety.